सालको रूखमुनि कालोपत्रे ! – Koshidaily
सालको रूखमुनि कालोपत्रे !
access_alarms Koshi daily ३१ बैशाख २०७७, बुधबार ०७:३१	chat_bubble_outline 0	Comments
३१ वैशाख, धनगढी । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढीले २०७३ फागुन र चैतमा विज्ञापन गरेर ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न बोलपत्र आह्वान गर्‍यो ।पाँचवटा प्याकेजमा निकालिएको त्यो बोलपत्रको ठेक्का धनगढीकै दुईवटा ठेकेदार कम्पनी रोयल जेभी, केएस जेभीले पाए ।
रोयल जेभी निर्माण व्यवसायी संघ कैलालीका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश सेठीको कम्पनी हो भने केएस जेभी निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य भीमबहादुर पालको कम्पनी हो ।शहरी विकास मन्त्रालय र ठेकेदार कम्पनीबीच ९ असार ०७४ मा ७१ करोड ३२ लाख रुपैयाँका सडक कालोपत्रे गर्ने ठेक्का सम्झौता भयो ।
२०७६ असारभित्रमा ५० किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गरियो पनि । सडक हस्तान्तरण भएर सञ्चालनमा आएको अहिले झण्डै ९ महिना भइसक्यो ।तर, सडक निर्माणको न्यूनतम मापदण्डको धज्जी उडाइएकोे भन्ने अहिले पनि जो–कोहीले सजिलो गरी देख्न सक्छ । सडकको बीचमा गन्नै हम्मे पर्ने संख्यामा सालका रूखहरू छन् । बिजुलीका पोल र ट्रान्सफरमर पनि अनगिन्ती छन् ।
सडक बन्नुअघि अनिवार्य रूपमा गरिनुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गरिएको छैन । सडक निर्माण सकिएपछिको अनगुमन पनि नाम मात्रैको छ । न्यूनतम मादपण्ड पूरा नगरी बनाइएकोले सडक भत्किन शुरू भइसकेको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ धनगढी चाहिँ सडक निर्माण भइसकेपछि ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने ध्याउन्नमा छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय धनगढी इकाइका तत्कालीन प्रमुख इञ्जिनियर महेन्द्र पन्तका अनुसार, कुनै पनि सडक योजना छनोट भएपछि न्यूनतमरूपमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्छ । डीपीआर बनाउँदा सडकमा वन क्षेत्र परेमा ईआईए अनिवार्य हुन्छ । पन्त भन्छन्, ‘डीपीआर र ईआईए स्वीकृत भएपछि मात्रै जाने हो टेण्डर प्रक्रियामा ।’
तर, शहरी विकास मन्त्रालयले बजेट ‘फ्रिज हुने भय’ देखाएर ईआईएविना नै हतार–हतारमा सडक बनाउँदा ५० किलोमिटर सडकमा २०० वटा रूख, २०४ वटा बिजुलीका पोल र दुईवटा ट्रान्सफरमर बाटोमै परे ।
सघन शहरी विकास कार्यक्रमको ५० किलोमिटर यो सडकभित्र धनगढी उपनगरपालिका वडा नम्बर १ मा तीन वटा सडक, वडा नम्बर २ मा दुईवटा, वडा नम्बर ३ मा एउटा, वडा नम्बर ४ मा एउटा, वडा नम्बर ५ मा दुईवटा, ५, ६ र ७ नम्बर वडा जोड्ने तीनवटा सडक छन् ।
वडा नम्बर १४ मा एउटा, १६ मा दुईवटा, १७ मा एउटा र १८ मा दुईवटा सडकहरू पर्छन् । यी सडकलाई पाँच वटा टुक्रा पारेर ठेक्का दिइएको थियो । यसमध्येमा पर्ने वडा नम्बर ७ को कालिका मन्दिरदेखि क्याम्पस पुलसम्मको जाली सडकको कुल लम्बाइ तीन किलोमिटर ३६० मिटर छ । तर, यो तीन किलोमिटर सडकमै ४३ वटा रूख र ७ वटा पोल बीच बाटोमा छन् ।
सडकको बीचमै रूख र पोल राखेर कालोपत्रे गर्दा ठेकेदार स्वयंले आफूहरूलाई काम गर्न असजिलो भएको बताउने गरेका छन् । धनगढीको रोयल जेभीका टेकबहादुर मल्ल भन्छन्, ‘रोलरले जति दबाउन सक्यो कालोपत्रे त्यति बलियो हुन्छ । तर, सडकमा परेका रूख र पोल नहटाइएकाले धेरै ठाउँमा रोलर लगाउनै सकिएन ।’
सघन शहरी विकास सडकको दोस्रो खण्डमा चाहिँ कुल १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ । त्यसमा ८ किलोमिटर लम्बाइको भन्सार–चटकपुर–फाप्ला राजपुर सडक र तीन किलोमिटर लामो हुलाकी रोड–कमैया बस्ती ‘डी’ गाउँ सडक छन् ।
हुलाकी रोड–कमैया बस्ती ‘डी’ गाउँ सडकमा परेका चारवटा रूख त्यतिकै छाडिएको छ भने सडक बीचका २५ वटा विद्युत्का पोल नहटाई कालोपत्रे र ढल निर्माण गरिएको छ । यस्तै भन्सार–चटकपुर फाप्ला सडकमा ४८ पोल र एउटा रूखलाई जस्ताको तस्तै छाडिएको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि हैरान छन् । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ का स्थानीय सुरेश ठकुल्ला भन्छन्, ‘सडकमा पर्ने रूख र विद्युत्का पोल हटाउन हामीले पटक–पटक उप–महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका हाकिमलाई आग्रह गर्‍यौं । तर, हाम्रो कुरा कसैले सुनेनन् ।’
फूलबारी कोल्ड स्टोर सडकमा एउटा ट्रान्सफर्मरसहित चारवटा पोल सडकमै छन् । रु.९ करोड ६५ लाखमा बनाइएको यो सडकको तेस्रो खण्डको ६ किलोमिटरभित्र ७४ वटा बिजुलीका पोल र ७ वटा रूख सडकमै पर्छन् । यो खण्डको एक किलोमिटर लामो शिवनगर–जाली सडकमा ३० वटा पोल नालीको बीचमा छन् ।
कतिसम्म भने करीब १२०० मिटरको कर्बस्थान सडकमा ७ वटा रूख र ९ वटा बिजुलीका पोल छन् । ९०० मिटरको बैयाबेहडी सरस्वतीनगर सडकमा विद्युत् र दूरसञ्चार प्राधिकरणका गरेर २६ वटा पोल बाटामा पर्छन् । त्यसैगरी ६२० मिटरको आउजी–कालिका सडकमा बिजुलीका पाँच वटा पोल सडकमै छन् ।
त्यस्तै आधा किलोमिटरको शीतलमार्ग ज्योति बोर्डिङ सडक खण्डमा चारवटा पोल नालीको बीच र सडकमै छन् । दुई किलोमिटर लामो पिपलचौतारा जाई मट्यारी बेला सडकमा ३० वटा पोल र सात वटा रूख यथावत् छाडिएको छ । १२ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको ऊर्जा पथरी धर्जुन्न सडकमा चार वटा रूख र तीन वटा बिजुलीका पोल सडकमा परेका छन् ।